Iràna · Janoary, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Iràna · Janoary, 2019
Tantara mikasika ny Iràna tamin'ny Janoary, 2019
Hafanam-po30 Janoary 2019
Mediam-bahoaka29 Janoary 2019
Syria28 Janoary 2019
Iran: Nosamborina i Abtahi, bilaogera malaza
(Marihina fa tamin'ny volana Jona 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Nosamborina ilay mpitondra fivavahana, filoha lefitra teo aloha sady bilaogera Mohammad Ali Abtahi. Fantatra fa nandray anjara tamin'ny hetsi- panoherana ny valim-pifidianana ho filoham-pirenena izy.
Iran: Mila didim-pitsarana ny fandraràna tranonkala
Mediam-bahoaka24 Janoary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Septambra 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Araka ireo tranokalam-baovao sy ireo bilaogy dia nilaza ny Lehiben'ny Fitsarana Iraniana Ayatollah Shahroudi ny Alahady fa mila didy avy amin'ny fitsarana ny raharaha rehetra ahitana ny fandraràna tranonkala. Nanampy ihany koa izy fa tsy tafiditra ao anatin'izany ireo...
Mediam-bahoaka23 Janoary 2019
FreeAccess Plus!: Miasa manoloana ny fibahanana Web 2.0
Mediam-bahoaka22 Janoary 2019
Namoaka ny "FreeAccess Plus!" ny developera Iraniana iray hafa, MohammadR, fanitarana mamadika ny Firefox ho ao amin'ny proxy izay manala ny sivana ao amin'ny tranonkala malaza toy ny YouTube, del.icio.us, Flickr, Technorati.com, FriendSter.com, livejournal.com, MySpace, Hi5 ary ny hafa. Maro amin'ireo vohikala ireo no voaràra ao Iran.